Shiinaha Soosaarka Nidaamka Moobilka Mashiinka Korantada | Huade
Nidaamka kudhaca mobaylka korantada waa nidaam cufnaan sare leh oo lagu hagaajinayo booska bakhaarka, halkaasoo rakibayaasha lagu dhejiyo shaashadda moobiilka oo lagu hagayo waddooyinka dhulka, in kasta oo qaabeynta horumarsan ay shaqeyn karto tareen la'aan.
Gawaarida waxaa lagu qalabeeyaa matoor awood u siinaya sagxadaha inay ku dhex socdaan wadada, kana tagayaan furitaanka forklift si loo helo. Furitaanka hal waddo oo keliya ayaa loo baahan yahay halkii laga marin lahaa wadooyin badan oo loogu talagalay forklift si loogu maro sida nidaamka raajada xulashada dhaqameed.
Tallaabooyinka ka hortagga ah sida furayaasha istaagga xaaladaha degdegga ah, caqabadaha marin-u-helidda sawir-qaadaha, nidaamyada sii deynta gacanta, dareemayaasha u dhowaanshaha iyo sidoo kale caqabadaha badbaadada sawir-koronto ayaa jira si loo hubiyo badbaadada shaqaalaha iyo alaabada.
Nidaamka qalabka elektarooniga ah ee qalabka lagu rakibo wuxuu ku qalabaysan yahay PLC si uu u fuliyo amarrada ka soo baxa kontoroolka fog ee hawlwadeenka, shaqooyinka caqliga leh sida kordhinta farqiga u dhexeeya mashiinka wareegga hawo wanaagsan ayaa lagu samayn karaa iyada oo loo marayo barnaamijka PLC, howlaha noocan oo kale ah waxay ka dhigayaan nidaam isdaba-joog ah .
Looxyada toosan ayaa lagu dhejiyaa jiiska, iyo alwaaxyada ayaa loo isticmaalaa in lagu raro balastarrada isla markaana lagu xiro toosinta iyo jiiska, mararka qaarkood armaajo ayaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo walxaha yaryar. Sababtoo ah dhererka forklift ee uu gaari karo badanaa wuu xadidan yahay, nidaamkan dharbaaxo badanaa waxaa loogu talagalay bakhaarada leh dherer hoose iyo mid dhexdhexaad ah.
Nidaamka rakibaadda mobilada korontada ku habboon wuxuu ku habboon yahay dadka isticmaala ee doonaya inay ballaadhiyaan kaydinta laakiin waxay ku xaddidan yihiin sagxadda dhulka ee bakhaarka. Meesha ugu hooseysa ee la isticmaalo ayaa ka dhigaysa nidaamka qashinka moobiilka xulasho fiican oo loogu talagalay kaydinta qabow.
Faa'iidooyinka nidaamka xarrago moobiil koronto:
Kaydinta xajmiga ah iyada oo aan lahayn sagxad dheeri ah
Dayactir hoose iyo hawlgal deggan
Habdhiska firidhku habeenkii ayaa u oggolaanaya wareegga hawo wanaagsan oo qabow (kaydinta qabowga)
Nidaamka xakamaynta dareemayaal kala duwan si jawiga shaqada u ahaado mid nabdoon
Hore: Nidaamka Xamuulka Shidaalka
Xiga: Nidaamka Racking Shuttle
Sariirtaada Birta ah
Ku wad Rack
Nidaamka Bakhaarka sariirtaada